KMF/Cnoe: “Arahi-maso ny Ceni” | NewsMada
KMF/Cnoe: “Arahi-maso ny Ceni”
“Misy lalàna mifehy azy ny amin’ny rantsa-mangaikan’ny Ceni, raha ny fomba fijerin’ny KMF/Cnoe. Mametraka io lalàna io fa aty amin’ny foibe nasionalin’ny Ceni no misy ny fampisafidianana ny karazana solontena amin’izany.”
Izay ny fanazavan’ny filoha nasionalin’ny KMF/Cnoe, Andriamalazaray Andoniaina, manoloana ny ahiahy hoe olom-boatendrin’ny olom-panjakana ny rantsa-mangaikan’ny Ceni. Rehefa manomboka any amin’ny rantsa-mangaika eo anivon’ny faritany, na ny faritra, na ny distrika, na kaominina, eny, hatrany fokontany amin’ny “agent électoraux”: tena fahefan’ny Ceni foibe tanteraka ny manendry ireny olona ireny, raha ny voalazan’ny lalàna mifehy ny Ceni.
Mila ovaina ny lalàna, raha hanova…
“Raha hanova an’izay isika, mila ovaina ny lalàna mifehy ny Ceni “, hoy izy. Raha tsy izay, miomana isika amin’ny hoe: mila mametraka fitokisana amin’ireo rantsa-mangaikan’ny Ceni ireo. Na eo aza izay fitokisana izay, mila fanaraha-maso ihany koa…
Tamin’ny lalàna mifeny ny Ceni teo aloha, mipetraka tsara ny fisoloan-tena isaky ny rantsa-mangaika isan’ambaratonga. Amin’izao fotoana izao, eo anivon’ny foibe nasionaly ihany ny fisoloan-tena no tena mipetraka, satria izay ny voalazan’ny lalàna.
Tsy ao anatin’ny rantsa-mangakain’ny Ceni ny lehiben’ny fileovana na “prefet”, ny lehiben’ny distrika na ny delegem-panjakana. Na izany aza, afa-mila vonjy amin’izy ireny ny Ceni amin’ny fotoana mety manahirana azy. Izay ny antony…
Vokany, lasa manao tamberin’andraikitra amin’izay nanendry azy fa tsy amin’ny Ceni ilay rantsa-mangaika. Nokianin’ny KMF/Cnoe hatrany izay hatramin’izay. Rehefa misy lalàna holanina, matetika mitsikera izay tsy mety amin’izany ny KMF/Cnoe, fa tsy mitsikera olona. Nefa matetika, tsy rototra amin’izay mpisehatra ara-politika. Rehefa ho tonga ny fifidianana izao vao mikoropaka avokoa amin’izay noresahina tany aloha.